မွနျမာလို ဖှဲ့ဖွိုးဆဲနိုငျငံတှမှော ဘာသာရေးသမားတှေ ဘာကွောငျ့ နရောရနကွေတာလဲ......
မွနျမာလို ဖှဲ့ဖွိုးဆဲနိုငျငံတှမှော ဘာသာရေးသမားတှေ ဘာကွောငျ့ နရောရနကွေတာလဲ……
11/09/2021 By fella News
ဖှံဖွိုးပွီးနိုငျငံတှမှော ဘာသာရေးသမားတှေ သိပျပွီးနရောမရကွဘူး။ ဧညျ့လမျးညှနျဘဝမှာ ဆုံခဲ့သမြှဧညျ့သညျအတျောမြားမြား ဘုရားကြောငျးသှားတဲ့သူ ရှားတယျ။ တဈနှဈကို တဈခေါကျတောငျ မရောကျကွတော့ဘူး။ ကိုယျလုပျမှ ကိုယျရမယျဆိုတာကို သူတို့က တကယျသိသှားပွီးတဲ့နောကျ ဘယျဘုရားကိုမှ အားမကိုးတော့ဘူး။ အဲ့ဒီအကွောငျးကို စသိခါစက ကိုယျ့မှာ အံ့ဩယူရတယျ။ အဲ့ဒီတုနျးက ကိုယျ့အမွငျတှမေပွောငျးသေးဘူး။ ကြှနျတျောတို့အမွငျမှာ “ဘာသာရေးကိုငျးရှိုငျးတဲ့သူ” ဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျဟာ လုံးဝဂုဏျယူစရာ အကောငျး
လက်ခဏာဆောငျပါတယျ။ သူတို့အမွငျမှာတော့ “He is very religious” ဆိုတာဟာ သိပျတော့ကောငျးမနပေါဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ကမ်ဘာမှာဖွဈနတေဲ့ ပဋိပက်ခအတျောမြားမြားက ဘာသာရေးအစှနျးရောကျတှကွေောငျ့ဖွဈကွရတာမြားတယျလို့ ယူဆထားကွတယျ။ ကမ်ဘာ့သမိုငျးမှာကွညျ့ပွနျရငျလညျး အရှညျကွာဆုံးစဈပှဲဟာ နှဈ ၂၀၀ နီးပါးကွာရှညျခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးစဈပှဲတှပေါပဲ။ တဈခြိနျတုနျးကတော့ ဒီစကားတှေ ထုတျမပွောဖွဈဘူး။ ရှေးရိုးစှဲပုဂ်ဂိုလျတှရေဲ့ မရိုးအီနိုငျတဲ့ အကွောငျးပွခကျြကွောငျ့လညျးပါတယျ။ “သူတို့နိုငျငံတှကေ တိုးတကျပမေယျ့
တို့မွနျမာပွညျလောကျ မအေးခမျြးပါဘူး။ ရိုသလေေးစားမှုလညျးမရှိကွ၊ အရှကျတရားလညျးမရှိကွနဲ့။ အဲ့ဒါတှကွေောငျ့ မကွားဖူးတာတှကွေားရ၊ မဖွဈဖူးတာတှဖွေဈကွနဲ့ ခဏခဏ ဒုက်ခရောကျကွတာ။” အဲ့ဒီ စကားပွောခဲ့သူတှေ အခုရော ဘာစကားပွောမလဲလို့ မေးကွညျ့ခငျြသေးတယျ။ နောကျတဈခကျြက ကြှနျတျောတို့ဆီမှာ သိတာနဲ့ ကငျြ့တာကို သိပျမကှဲကွဘူး။ ဥပမာ တရားတှနော၊ ဘုရားစာတှကေကျြပွီး သိနတောကို ပီတိတှသေိပျဖွဈကွတယျ။ တဈခါတဈလေ ဘာသာရေးကို ဂုဏျဆာပွီးလုပျတာမြိုးကရှိသေး။ သိပမေယျ့ ကငျြ့သလားဆိုတော့ တကယျကငျြ့တဲ့လူက
လကျခြိုးရလေို့ရတယျ။ ဘုရားဟောတရားတှကေို တကယျသာကငျြ့ကွံရငျ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံ ထိပျဆုံးကိုရောကျနတောကွာပွီ။ အမှုအခငျးတှလေညျးနညျးပါးနပွေီ။ ကြှနျတျောတို့ ဖှံ့ဖွိုးဆဲနိုငျငံတှမှောက ဘာသာရေးကို အပေါစားဆနျဆနျကိုးကှယျတဲ့သူတှေ သိပျမြားတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့လဲ ဘာသာရေးနဲ့ မှိုငျးတိုကျလို့ရတယျ၊ လိမျရတာသိပျလှယျတယျ။ ဘုရားက သဒ်ဓါနဲ့ ပညာ မြှတပါစလေို့ ဟောခဲ့တယျ။ ကြှနျတျောတို့တှကေ ဘယျဘကျကို ပိုအလေးသာနတေယျ ထငျလဲ???
မြန်မာလို ဖွဲ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ ဘာသာရေးသမားတွေ ဘာကြောင့် နေရာရနေကြတာလဲ……
ဖွံဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာ ဘာသာရေးသမားတွေ သိပ်ပြီးနေရာမရကြဘူး။ ဧည့်လမ်းညွှန်ဘဝမှာ ဆုံခဲ့သမျှဧည့်သည်အတော်များများ ဘုရားကျောင်းသွားတဲ့သူ ရှားတယ်။ တစ်နှစ်ကို တစ်ခေါက်တောင် မရောက်ကြတော့ဘူး။ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရမယ်ဆိုတာကို သူတို့က တကယ်သိသွားပြီးတဲ့နောက် ဘယ်ဘုရားကိုမှ အားမကိုးတော့ဘူး။ အဲ့ဒီအကြောင်းကို စသိခါစက ကိုယ့်မှာ အံ့ဩယူရတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက ကိုယ့်အမြင်တွေမပြောင်းသေးဘူး။ ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာ “ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတဲ့သူ” ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ဟာ လုံးဝဂုဏ်ယူစရာ အကောင်း
လက္ခဏာဆောင်ပါတယ်။ သူတို့အမြင်မှာတော့ “He is very religious” ဆိုတာဟာ သိပ်တော့ကောင်းမနေပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကမ္ဘာမှာဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခအတော်များများက ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တွေကြောင့်ဖြစ်ကြရတာများတယ်လို့ ယူဆထားကြတယ်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာကြည့်ပြန်ရင်လည်း အရှည်ကြာဆုံးစစ်ပွဲဟာ နှစ် ၂၀၀ နီးပါးကြာရှည်ခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးစစ်ပွဲတွေပါပဲ။ တစ်ချိန်တုန်းကတော့ ဒီစကားတွေ ထုတ်မပြောဖြစ်ဘူး။ ရှေးရိုးစွဲပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ မရိုးအီနိုင်တဲ့ အကြောင်းပြချက်ကြောင့်လည်းပါတယ်။ “သူတို့နိုင်ငံတွေက တိုးတက်ပေမယ့်
တို့မြန်မာပြည်လောက် မအေးချမ်းပါဘူး။ ရိုသေလေးစားမှုလည်းမရှိကြ၊ အရှက်တရားလည်းမရှိကြနဲ့။ အဲ့ဒါတွေကြောင့် မကြားဖူးတာတွေကြားရ၊ မဖြစ်ဖူးတာတွေဖြစ်ကြနဲ့ ခဏခဏ ဒုက္ခရောက်ကြတာ။” အဲ့ဒီ စကားပြောခဲ့သူတွေ အခုရော ဘာစကားပြောမလဲလို့ မေးကြည့်ချင်သေးတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ သိတာနဲ့ ကျင့်တာကို သိပ်မကွဲကြဘူး။ ဥပမာ တရားတွေနာ၊ ဘုရားစာတွေကျက်ပြီး သိနေတာကို ပီတိတွေသိပ်ဖြစ်ကြတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဘာသာရေးကို ဂုဏ်ဆာပြီးလုပ်တာမျိုးကရှိသေး။ သိပေမယ့် ကျင့်သလားဆိုတော့ တကယ်ကျင့်တဲ့လူက
လက်ချိုးရေလို့ရတယ်။ ဘုရားဟောတရားတွေကို တကယ်သာကျင့်ကြံရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ ထိပ်ဆုံးကိုရောက်နေတာကြာပြီ။ အမှုအခင်းတွေလည်းနည်းပါးနေပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာက ဘာသာရေးကို အပေါစားဆန်ဆန်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေ သိပ်များတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လဲ ဘာသာရေးနဲ့ မှိုင်းတိုက်လို့ရတယ်၊ လိမ်ရတာသိပ်လွယ်တယ်။ ဘုရားက သဒ္ဓါနဲ့ ပညာ မျှတပါစေလို့ ဟောခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေက ဘယ်ဘက်ကို ပိုအလေးသာနေတယ် ထင်လဲ???
အခြို့သော ဘုနျးကွီးတှဟော ( အားလုံးကိုမဆိုလို ) ဒီမိုကရစေီရရှိသှားမှာ စိုးရိမျကွောကျရှံ့ပွီး စဈအာဏာရှငျလကျအောကျမှာပဲ အဘယျကွောငျ့ နခေငျြကွတာလဲ …?
ယနေ့ ဂနျ့ဂေါ ပဈခတျမှုမှာ ကဆြုံးသှားခဲ့ရတဲ့းအထကျတနျးကြောငျးသားလေးတှအေတှကျ တာဝနျကကြွေောငျး မကျြရညျနဲ့ရေးတဲ့ဆရာမလေးရေးတဲ့စာ
© Super Union 2021 Super Union2021 • Themaga powered by WordPress